HDMI | January 2020
Mee ka AMD AMD pụta - Ha ejighị ya
AMD HDMI mmepụta bụ aha njikọ ọdịyo site na HDMI cable na TV mgbe kọmputa dabeere na ndị isi ihe na AMD processor. Mgbe ụfọdụ na mpaghara nchịkwa ọdịyo na Windows, ị nwere ike ịhụ na enweghị njikọ a, nke na-egbochi nzaghachi ụda dị mma na TV ma ọ bụ nyocha site na kọmputa.
Kedu ihe bụ HDMI maka?
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ, na-elekwasị anya na-arụ ọrụ na vidiyo na ọdịyo, enwere njikọ njikọ HDMI. Iji jikọọ na nke a enweghị ike ime n'enweghị eriri kwesịrị ekwesị. Banyere ihe ọ bụ na ihe kpatara ya ji dị ya mkpa, anyị ga-agwa ya na isiokwu anyị taa. Banyere interface The abbreviation HDMI na-anọchite anya High Definition Multimedia Interface, nke pụtara "interface maka multimedia dị elu."
Ngwado nke HDMI na DisplayPort
HDMI bụ interface kachasị ewu ewu maka ịnyefe data vidiyo dijitalụ na kọmputa na nyocha ma ọ bụ TV. A na-ewu ya n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ ọ bụla na kọmputa, TV, nyocha na ọbụna ụfọdụ ngwaọrụ mkpanaka. Mana o nwere onye na - amachaghị amara - DisplayPort, nke, dị ka ndị mmepe, nwere ike igosi foto dị mma na etiti njikọ.
Anyị jikọọ PS3 na laptọọpụ site na HDMI
Sony PlayStation 3 egwuregwu egwuregwu nwere ihe nkiri HDMI na ya, nke na - enye gị ohere ijikọ njikwa ahụ na ụda pụrụ iche gaa na TV ma ọ bụ nyocha iji nyepụta ihe oyiyi na ụda, ma ọ bụrụ na akụrụngwa nwere njikọ dị mkpa. Laptọọpụ nwere ọdụ ụgbọelu HDMI, mana ọtụtụ ndị nwere nsogbu njikọ.
Gbanwe nsogbu na onye na-arụ ọrụ HDMI-VGA anaghị arụ ọrụ
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na ndị nlekota oge ochie na-eche ihu na enweghị njikọ njikọ dijitalụ na kaadị ọhụrụ. Na nke a, enwere otu ngwọta - ojiji nke ntanetị pụrụ iche na ndị ntụgharị. Izi ezi nke ọrụ ha na-adabere na ụdị kaadị vidiyo, nyochaa na àgwà nke ngwaọrụ ahụ n'onwe ya.
Ngwudata nke nsụgharị HDMI na-akwado nkà na ụzụ ARC, nke ọ ga-ekwe omume ịkwaga ma vidiyo na ihe ọdịyo na ngwaọrụ ọzọ. Mana ọtụtụ ndị na-eji ngwaọrụ nwere ọdụ ụgbọelu HDMI na-eche nsogbu ihu mgbe ụda na-abịa site na ngwaọrụ na-eziga mgbaàmà, dịka ọmụmaatụ, laptọọpụ, ma ọ dịghị ụda sitere na ịnweta (TV).
Gịnị bụ eriri HDMI
Enwere ike ịchọta ngwa ngwa dị iche iche nke ngwaọrụ dị iche iche (interface for high-definition multimedia). Akara nke aha a maara nke ọma na nke zuru ezu HDMI, nke de facto bụ ọkọlọtọ maka ijikọta ihe akpọrọ ihe nke na-akwado mmepụta ihe oyiyi dị elu (site na FullHD na n'elu).
Họrọ igwe HDMI
HDMI bụ nkà na ụzụ eletriki dijitalụ jigoro na nke e mesịrị gbanwee gaa na ihe oyiyi, vidiyo na ọdịyo. Taa bụ nhọrọ ntanetị kachasị na-ejikarị mee ihe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-agụnye ya, site na smartphones na kọmputa nkeonwe.
Anyị na - edozi nsogbu ahụ na ụda na TV site na HDMI
Ndị ọrụ ụfọdụ jikọọ kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ na TV iji jiri ya dịka nyocha. Oge ụfọdụ, enwere nsogbu na igwu ụda site na njikọ nke ụdị a. Ihe mere kpatara nsogbu dị otú a nwere ike ịbụ ọtụtụ ma ha bụ isi na-adabere na ọdịda ma ọ bụ ntanetịime ntanetịime na sistemụ arụmọrụ.
Gini mere i ji choro HDMI na TV
N'ihe ngosi telivishọn nke oge a, ọnụ ọgụgụ price na n'elu ọnụahịa, na mgbe ụfọdụ a na-emefu ego, onye ọrụ nwere ike ịchọta ọtụtụ ntinye dị iche iche. Ogologo mgbe nile n'etiti ha bu HDMI, otu ma obu otutu iberibe. Na nke a, ọtụtụ ndị nwere mmasị na ihe nwere ike jikọọ na njikọ a na otu esi eme ya.
DVI na HDMI Nfọnyere
Iji jikọọ onyunyo na kọmpụta, ejiri njikọ pụrụ iche, nke a na-etinye aka na motherboard ma ọ bụ dị na kaadị vidiyo, na eriri pụrụ iche ndị kwesịrị ekwesị maka njikọ ndị a. Otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ndị kachasị ewu ewu taa maka igosipụta ozi dijitalụ na kọmpụta kọmputa bụ DVI.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na laptọọpụ adịghị ejikọta na TV site na HDMI
Ijikọ laptọọpụ na TV na HDMI-interface, ụfọdụ ndị ọrụ ada. Enweghi ihe ozo ma obu ihe di na TV, ma enwere otutu ihe kpatara nke a. Dị ka a na-achị, ha nwere ike kpochapụ n'enweghị nsogbu siri ike, na-agbaso ndụmọdụ dị n'okpuru ebe a. Laptọọpụ adịghị ejikọta na TV site na HDMI Jikọtara site na HDMI bụ otu n'ime oge a kachasị ewu ewu, n'ihi na ọ na-enye gị ohere igbupụta ụda na onyinyo dị mma ma nwee ike dị ka o kwere mee.
Otu esi eme ka HDMI na laptọọpụ
Site n'enyemaka nke njikọ HDMI, a na-ebunye data multimedia na ezigbo mma na nnukwu ọsọ. A na-ebufe ozi site na eriri pụrụ iche ejikọrọ na ngwaọrụ abụọ ma ọ bụ karịa. HDMI bụ ihe ngosi dijitalụ kachasị ewu ewu ma dochie ochie analog otu.
Anyị jikọọ kọmputa na TV site na HDMI
Ngwa interface HDMI na-enye gị ohere ịnyefe ọdịyo na vidiyo site n'otu ngwaọrụ gaa na ọzọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, maka ngwaọrụ jikọtara, ọ bụ iji jikọọ ha na iji eriri USB. Ma ọ dịghị onye ọ bụla na-egbochi nsogbu. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ n'ime ha nwere ike idozi gị ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ozi mmeghe Mbụ, jide n'aka na njikọta na kọmputa na TV bụ otu ụdị na ụdị.
TV adịghị ahụ kọmputa site na HDMI
HDMI bụ ihe na-ewu ewu maka imekọrịta ngwaọrụ dị iche iche (dịka ọmụmaatụ, kọmputa na TV). Ma mgbe ị jikọtara, nsogbu dịgasị iche iche nwere ike ibili - oru na / ma ọ bụ ngwanrọ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike idozi onwe ha, iji kpochapụ ndị ọzọ ọ nwere ike ịdị mkpa iji rụọ ọrụ ma ọ bụ iji dochie eriri rụrụ arụ.
Anyị na-eji laptọọpụ dịka nyocha maka kọmputa
Ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọta elekere abụọ na kọmpụta, mana enweghị ya, mgbe ahụ enwere nhọrọ nke iji laptọọpụ dịka ngosipụta maka PC. A na-eme usoro a site na iji otu cable na obere ntọala nke sistemụ. Ka anyị leba anya na nke a n'ụzọ zuru ezu karị. Anyị na-ejikọta laptọọpụ ahụ na kọmputa site na HDMI. Iji mee usoro a, ị ga-achọ kọmputa arụ ọrụ na nyochaa, eriri HDMI na laptọọpụ.
Nkọwa nke njikọ VGA na HDMI
Ọtụtụ ndị ọrụ na-ezighị ezi kwenyere na àgwà na ịdị mma nke onyinyo ahụ gosipụtara na ngosipụta na-adabere nanị na nyocha ahụ ahọrọ na ike nke PC. Echiche a ezighi ezi. Ọrụ dị ịrịba ama na-ejikwa ụdị njikọ ọrụ na eriri arụ ọrụ. E nwere ugbua isiokwu abuo na ebe anyi na-ekwusara ndi ozo maka HDMI, DVI na DisplayPort.
Kedu ihe ma ọ bụrụ HDMI anaghị arụ ọrụ na laptọọpụ
A na-eji ọdụ ụgbọ mmiri HDMI eme ihe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ - laptọọpụ, telivishọn, mbadamba, kọmputa kọmputa nke ụgbọala, na ọbụna ụfọdụ smartphones. Ndị ọdụ ụgbọ mmiri ndị a nwere uru karịa ọtụtụ njikọ dị otú ahụ (DVI, VGA) - HDMI nwere ike ibunye ọdịyo na vidiyo n'otu oge ahụ, na-akwado nnyefe dị elu, na-adịkwu jụụ, na ihe ndị ọzọ.
Jikọọ PS4 na laptọọpụ site na HDMI
Ugbu a, PS4 abụghị naanị njikwa kachasị ike, ma ọ na-eduga ahịa, jiri nwayọọ nwayọọ na-asọpụ ndị asọmpi niile. Maka ya, ọtụtụ ndị na-emepụta kwa afọ, nke na-eme ka mmasị ndị ọrụ na-eme ka ha nwee ike ịzụta PS4 naanị iji kpọọ egwuregwu a chọrọ.
Jikọọ console egwuregwu PS4 na ihe nlekota na-enweghị HDMI
N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ohere imelite ndị nlekota ha, ọtụtụ ndị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ndị dị ugbu a, ndị àgwà ha adịtụbeghị. Otu n'ime isi ihe nchịkwa nke ngwa ochie bụ enweghị njikọ HDMI, nke ụfọdụ na-eme ka njikọ nke ụfọdụ ngwaọrụ, gụnyere PS4.
https://termotools.com ig.termotools.com © HDMI 2020